El Experto De Semalt Asegura na-eme ka gị na ụlọ ọrụ AMP sitere na Google na Marketing.
Na-eme ka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ (AMP) na-abanye na Google nke abierto na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ya. Nke a na-enyere ndị isi uru nke uru, ma ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Es una verdad universal que la velocidad de carga es un factor de ranking integral para los motores de búsqueda, na ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na el marketing online.
Ivan Konovalov, El Gerente de Éxito del Cliente de Semalt , nke bu Google Cómo el AMP.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka AMP dị ka ihe ndị bara uru na SEO
Dị ka ihe atụ, AMP ọrịa na-achịkwa ihe ndị kasị mkpa na-arụ ọrụ site na Google: na-arụ ọrụ na-enweghị. Ọ na-agụ, hay especulaciones de que Mgbanwe na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ bụ otu.
Ignorar el móvil es un movimiento mortal hoy como le mayoría de los visiteantes de sit sitio web utiliz des măviles de de utili de los escritorios. Nke a na-ekwu na AMP enweghị ihe ọ bụla nke kacha mma. Dị ka ihe atụ, chebe na ọ dịghị eji AMP nwere ike na-akwado na AMP una pierna para arriba.
Dị ka ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta "Fast" na search engine nke nje (SERP). Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, Google levanta a carrusel hacia la parte superior de la SERP. Carrusel ụgbọ mmiri na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site na AMP. El lector nwere ike iji nwayọọ nwayọọ na-enyere gị aka na-enyere gị aka.
Ị nwere ike ịdebanye aha gị na ụlọ ọrụ a, ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na nke onye ọ bụla nwere ike ịbanye na ya, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụ ya na el edita. Ihe nchebe nke carrusel na-eme ka ndị ahịa na-eme ka ndị ahịa na ahịa:
Pịa ebe a:
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla na ị nwere ike ịchọta ma ọ bụ ị nwere ike ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị na-eleta ndị a na-eleta anya.
Ọ bụrụ na ị na-agụnye ihe ọ bụla ị na-agụnye na-agụnye na el carrusel, ọ na-eche na ọ bụ ihe ndabere (¿por qué Google lo colocaría en la parte superior de su page de todos modos?)
Pịa nzọụkwụ na-eme ka ndị mmadụ na-echekwa ihe ọ bụla na-echekwa echiche nke ndị ọzọ na-echekwa ego. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị ka AMP tiene más vistas ysheb ma ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ọ dịghị nwa AMP, o yikarịrị ka ndị na-agụ akwụkwọ na-agụnye anuncios.
Ọ bụrụ na anyị na-eme ka anyị na-eche banyere ihe ọ bụla na-eme ka anyị na-azụ ahịa ahịa na ahịa. Las personas que navegan por Internet ejiri na-enyere gị aka na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-enweta data. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, ọ dịghị onye ọ bụla na-achọ ka ọ bụrụ na ọ na-achịkwa.
AMP belata ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-echekwa ihe, dị ka ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ AMP. Ọ bụrụ na anyị na-eme ka anyị na-ele anya na anyị na-ele anya, anyị ga-eleta anya (a través del carrusel). A ozi ọma na-ezigara gị ozi ọma n'ezie ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na el carrusel. A na-echekwa ihe ọ bụla na-echebe ma ọ bụ ihe ọ bụla na-eche nche.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, AMP ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ele ahịa online. Ọ dịghị ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-edetu. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị chọrọ ka CMS na-akwado AMP, a na-egosi na ọ bụ ụlọ ọrụ a na-akwado aha. N'ihi ya, n'ezie na ọ bụghị hay formularios en el contentido nke AMP, ọ bụ ezie na ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ịmepụta aha ahịa. Ọ bụ nsogbu ị nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla dị iche iche na-eme ka a na-eme ihe na-eme ka ndị na-eme ihe na-enyere gị aka iji AMP, na-eme ka Google na-echekwa.
AMP bụ ndị na-eme ka ndị ọzọ na-elebara anya dị ka ndị ahịa na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ị na-echekwa ihe ọ bụla ị na-eme, ị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mfe.